Ahoana ny fananganana tranokala aorian'ny fividianana anarana nomena anarana? - Step By Step Guide
Betsaka no mety mino fa mila manangana mpamorona tranokala ianao hananganana tranokala fa ny zava-misy dia efa mandroso ampy ny teknolojia ankehitriny, vitanao samirery izany fa tsy misy fahalalana teknika.
Mila mpanamboatra tranokala tsara ianao hananganana tranokala mifanaraka amin'ny ilainao. Mora dia mora ny dingana. Manazava fitarihana vahaolana tonga lafatra amin'ny famahana ny olanao amin'ny famoronana tranokala iray manontolo aho.
Rehefa avy mividy anarana domain ianao, mila sehatra fampiantranoana aloha ianao. Toerana fampiantranoana mitahiry ny atin'ny tranokalanao. Faharoa, Manangana tranokala, mila mpanamboatra tranokala ianao. Farany, kely saina mamorona.
Ny vidin'ny fananganana tranokala
Mpanangana tranokala malaza
Fananganana tranokala misy anaran'ny Domain
Ny fametrahana ny sehatra ary koa ny fampiantranoana
Fa talohan'izay, ianao mety te hahafantatra hoe ohatrinona ny tena vidiny amin'ny fananganana tranokala mijery matihanina tsara. Ny valiny dia miankina tanteraka amin'ny karazana tranokala tadiavinao. Ny tranokala orinasa kely dia manomboka amin'ny vidiny ambany noho $100 isan-taona ary mandany dolara an'arivony maro isan-taona izy io miaraka amin'ireo takiana matihanina tafahoatra.
Manoro hevitra manokana ny mpanjifanay izahay mba hanangana tranokala misy famatsiam-bola kely rehefa mihalehibe amin'ny orinasanao ianao, afaka manampy endri-javatra mandroso ianao.
Misy mpanangana tranokala maro azo antoka fa manampy anao hanangana tranokala mijery matihanina izany. Eto ambany eto no tanisiko ny tsara indrindra ho anao.
Gator avy amin'i HostGator
Maro amin'ireo mpanorina tranokala ireo no manana fotodrafitrasa hananganana tranokala amin'ny alàlan'ny fitarihana sy fitetezana tsotra. Ny zavatra farany dia tsy maintsy ampitahanao ny takinao sy ny tanjonao amin'ny fotodrafitrasa hatolony.
Azonao atao ny mandray ny tombotsoan'ny drafitry ny fitsarana azy ireo maimaim-poana ary raha mifanaraka aminao izany dia tokony handroso amin'ny alàlan'ny fandaharanao ny drafitra momba ny vidiny isam-bolana na isan-taona..
Tokony hataonao loha laharana ny fitomboanao, miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana– Afaka manampy vaovao farany ve ianao, mamela anao hanavao ny endri-javatra ilainao ve izany, manana ny fanohanan'ny mpanjifa ary koa ny endri-javatra azo entina. Mamela anao hifindra data avy amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa ve tsy misy fatiantoka?
Amin'ireo mpanorina tranokala voalaza etsy ambony, Tianay manokana manokana ny sehatra fampiantranoana anay. Ny mpanorina tranokala WordPress dia loharano misokatra, maimaim-poana, ary tonga miaraka amina modely sy fanitarana efa lasa an'arivony. Tena tsara izany.
Mihoatra ny 41 % ny mpampiasa internet dia mampiasa sehatra WordPress. Manomana tranokala ho an'ny mpanjifa foana izahay amin'ny WordPress. Izy io dia manana fahafaha-manao lehibe ary saika mifanaraka amin'ireo fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo.
Avy amin'ny fomba fijery SEO, nahita ohatra be dia be isika manazava tsy misy maharesy ny WordPress. SEO dia ny fahazoana laharana amin'ny milina fikarohana toy ny Google Bing sns. WordPress dia miaraka malefaka kokoa. Ny fiasa SEO dia manampy an'i Google sy ny hafa hahatakatra ny atiny. Ny fanatsarana ny motera fikarohana dia ny fanatsarana ny atiny amin'ny fomba laharanao amin'ny laharana voalohany. Hafa noho izany, resaka SEO ara-teknika koa. Azonao atao ny mahita horonan-tsary an'arivony mora amin'ny Internet mamaha ny fanontanianao momba ny WordPress ampitahaina.
Ny fananganana tranokala dia mahafinaritra foana. Raha sendra olana ianao eo am-pamoronana tranokala iray dia azonao atao ny mitsidika ny pejy mifandraisa aminay mba hifandray amin'ny mailaka.
Mampiasa matetika ny fahadisoana amin'ny alàlan'ny fisafidianana sehatra tsy mahomby. TSARA, misaotra ny vintana ianao eto aminay. WordPress dia karazana sehatra iray izay manana maodely vonona marobe efa vonona voafaritra mialoha. Volavola miaraka amin'ny add ons izay ahafahanao mamorona ny famoronana tranokala nanapa-kevitra.
ENY, Maimaimpoana ny WordPress, azonao sintonina avy amin'ny tranonkala ofisialy. Ankehitriny ny fanontaniana mipoitra avy aiza ny WordPress raha toa ka maimaim-poana? Ny valiny dia mahazo vola ianao amin'ny fividiananao ny toerana sy sehatra fampiantranoana anao.
Ireto misy tolotra tsara indrindra anio tokony hojerenao.
Soa ihany, tato ho ato, Serivisy fampiantranoana Bluehost manolotra endri-javatra be dia be amin'ny 60% tsy misy fihenam-bidy raha toa kosa ka misy orinasa hafa mety handoa vola anao isaky ny mampiavaka anao. Tsy izany ihany fa mahazo sehatra maimaim-poana izay saika mandany vola manodidina anao 14 ny 15 dolara isan-taona.
afaka mitsidika an'ity rohy ity ianao raha te handray soa tolotra mihazakazaka ankehitriny.
Tsy orinasa vaovao eo amin'ny tsena no nanompoany ny mpanjifa nanomboka teo 2005. Ankoatr'izay, raha miatrika karazana olana amin'ny fametrahana ny tranokalanao ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Ho anao foana izahay ary faly manampy.
Rehefa mitsidika ny tranonkala ofisialin'ny Bluehost ianao, manaraka dia mila tsindrio ianao “manomboka izao” hirosoana amin'ny fananganana tranokala.
Ity dia hitondra anao any amin'ny pejy manaraka miaraka amin'ny drafitra vidiny hafa. Ny olona sy ny orinasa dia mifidy ny drafitra arakaraka ny fametrahana azy sy ny karazana filany. Manoro anao izahay manokana hanombohana drafitra ifotony. Satria eo amin'ny dingana voalohany ianao, satria mivelatra amin'ny sehatra manaraka ny orinasanao, ny isan'ny mpitsidika mitsidika ny tranonkalanao, mifindra ianao hanatsara drafitra iray.
Na isaky ny manangana tranokala ho an'ny mpanjifako aza aho dia manoro hevitra azy ireo hividy drafitra fototra. Rehefa mampiroborobo ny tranonkalany aho, manomboka mahazo mpitsidika izy ireo, saika rehefa miampita 25000 mpitsidika isam-bolana. Avy eo mivadika drafitra nohavaozina aho.
fa tsy, Raha manisa ny vidiny aloha ianao amin'ny drafitra lafo dia lafo, mahatsiaro tena lafo loatra ianao. Ary manokana, tsy mamporisika anao izahay.
Manana traikefa be dia be amin'ny serivisy tsara fanahy toy izany izahay. Izahay no nitantana an'izao rehetra izao hatramin'ny farany 10 taona. Manome anao ny torohevitra tena izy fotsiny izahay.
Aorian'izay, hangataka anao hisafidy anaran'ny sehatra mety izy ireo. Eto ianao dia tokony hifikitra amin'ny .com. tokony ho araka ny anaranao miaraka amin'ny tsipelina marina izany. Rehefa mihalehibe ianao, ny mpanjifanao na ny mpampiasa anao dia mahafantatra tsara ny marika sy ny anaranao.
Ny dingana manaraka dia ny manontany anao antsipiriany fototra toy ny mailaka, Anarana, Anarana, sns. Fenoy ny pitsopitsony, ny dingana manaraka dia ho hitanao ny fiampangana tsy voatery atao toa ny fiarovana ny tranokala, fiarovana ny sehatra, tranonkala backup. Azonao atao ny mividy ireo fotodrafitrasa fanampiny ireo rehefa mila izany ianao.
Rehefa nanomboka ny tranokalan'ny mpanjifako aho, Tsy mividy azy ireo eo no ho eo mihitsy aho. Rehefa afaka iray na roa volana dia lasa ampy ny atin'ny tranokala, avy eo dia azo antoka fa mividy tranokala backup aho ary singa fiarovana.
Safidy fandoavam-bola aorian'izay, rehefa vita ny fividianana ny sehatra ary koa ny fampiantranoana. Ny andraikitra manaraka dia ny fametrahana WordPress amin'ny tranokalanao alohan'ny hananganana azy.
Rehefa misoratra anarana amin'ny kaontinao ianao, Hanome tranokala fametrahana tsindry iray ho an'ireo mpampiasa tsy teknika izy ireo. Ireo mpampiasa izay te-hametraka samirery ny tranonkalany raha tsy misy ny fanampian'ny olona fahatelo.
Rehefa ho vita ara-drariny daholo ny zava-drehetra “typeyoursite.com/wp-admin/” amin'ny mpizaha tranonkala dia hamindra ny pejy fidirana ianao.
Ampidiro ny fahazoanao miditra dia ho hitanao ny interface WordPress.
Volavola WordPress ary tantanan'ny lohahevitra efa voafaritra mialoha. Ilay voalohany dia tsy dia manintona sy manintona. Azonao atao ny manova azy mora foana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bika aman'endrinao –>lohahevitra.
Hahita pikantsary mitovy amin'izany etsy ambany ianao.
Amin'ny fipihana sy vaovao dia hanombanana ianao 1000+ lohahevitra WordPress tsara tarehy. Eto ny sosokevitra iray dia ny fametrahana ny lohahevitra mifanaraka amin'ny fangatahana na lazaiko fa tanjona. Ny lahatahiry lohahevitra WordPress dia manana lohahevitra indostrialy samihafa. Azonao atao ny manivana azy ireo araky ny lazany.
Ho an'ity torolàlana manokana ity, Eto aho dia hametraka WordPress lohahevitra maro lohahevitra WP ranomasina. Manana modely efa voaomana izy io. Ny tenanao dia azonao atao ny mametraka azy ireo amin'ny tsindry iray. Ary ampanjifaina ity toerana ity arakaraka ny filanao.
Ho an'ny fanoratana atiny amin'ny tranokalanao, azonao atao ny mampiasa ny paositra sy ny tranokalan'ny pejy. Ny paositra dia natao ho an'ny fanoratana ny atiny bilaogy matetika, fa ny pejy kosa azo antoka fa ampiasaina amin'ny pejy toa anay, politika Fiarovana fiainan'olona, Disclaimer, an-trano, sns.
Manangana tranokala aorian'ny mividy sehatra Tsy manahirana tanteraka tsy toy ny tamin'ny andro taloha. amin'izao fotoana izao, maro ireo mpanorina tranokala no efa nanamboatra sy manome fandaharana handrafetana sy hampiharana tranokala amin'ny alàlan'ny fitetezana sy fitetezana tsotra. Ny lafiny lehibe indrindra dia ny fahafaha-miovaova, mifanentana amin'ny hafa raha sendra misy fiovana lehibe. Ankoatr'izay, manana horonan-tsary manampy be dia be ve hamahana ny fanontaniantsika samirery. Nohazavainay ny safidy tsara indrindra hitazona ny faharetana ary hanananay izay rehetra ilainao.
Ohatrinona ny vola azonao amin'ny Blog WordPress
Previous PostRehefa mividy Domain avy amin'ny GoDaddy ianao? Ianao ve no tompony
Next PostAhoana ny fomba hamoronana tranokalan'ny bilaoginao
Ahoana no fomba hamoronana tranokala WordPress tsy misy fampiantranoana?
Raha mividy sehatra iray avy amin'ny GoDaddy aho, mila mampiantrano azy ireo ve aho?